Global Voices teny Malagasy » Fanazavana Kely Tamin’ny Fahatapahan’ny Aterineto tao Syria · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Janoary 2013 9:24 GMT 1	 · Mpanoratra Syria Deeply Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Saingy raha mbola teo am-piseraserana amin'ny aterineto izy, teo am-pitaterana ny daroka baomba ataon'ny fitondrana no nahazo ny faritra rehetra ao amin'ny firenena Syriana ny fahanginan'ny aterineto  [mg] tampoka. Tsy afaka niditra aterineto i Syria, ka nampitoka-monina azy tamin'ny tranonkala manerantany. Nidina hatrany amin'ny zero ny fidirana sy ny fivoahana ny lalamben'ny aterineto tao Syria, taoriana kelin'ny tamin'ny mitataovovonana. Nanamarina izany moa ny orinasam-panaraha-maso ny Web antsoina hoe Akamai. “Tafavoaka ny aterineto tokoa i Syria.”
Firan'ny fitadiavana DNS any amin'ny Valan'i Syria Domains, marika fa tsy tafapaka hatrany amin'ny mpisera aterineto Syriana ny fifandraisana teto amin'izao tontolo izao. (loharano )
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/02/43831/
 Syria Deeply: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/12/26/43598/www.syriadeeply.org
 fahanginan'ny aterineto: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/11/30/42150/